Habibiana tsy roa aman-tany… : maty nodoran’ny dahalo velona izy valo mianaka | NewsMada
Habibiana tsy roa aman-tany… : maty nodoran’ny dahalo velona izy valo mianaka
Par Taratra sur 11/07/2017
Nohidin’ireo dahalo avy ety ivelany ilay trano. Narehiny avy eo ka maty tsy tafavoaka velona tao ny fianakaviana iray misy olona valo mianaka. Ny herinandro lasa teo no nitrangan’ity habibiana mahatsiravina tao amin’ny fokontany Morarano, distrikan’Ambohimahasoa, Fianarantsoa ity.
Valifaty feno habibiana no nasetrin’ireto andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika tonga nampihoroho tao Morarano omaly alina ireto. Maty kilan’ny afo tao an-tranony izy valo mianaka noho ny herisetran’ireo dahalo. Araka ny fampitam-baovao voaray avy an-toerana, tonga nirodorodo tao an-tanàna ireo andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana. Nofantsihan’ireo dahalo avy eny ivelany ny varavaran’ity fianakaviana niharam-boina ity ka nodoran’ireo dahalo tamin’ny bozaka. Tsy afa-nivoaka ny trano izy valo mianaka ka kilan’ny afo niaraka tamin’ny trano.
Voalazan’ny fampitam-baovao hatrany fa tonga nanafika tao amin’ity tanàna ity ny andian-dahalo marobe nikasa hangalatra omby, ny herinandro teo. Tsy nanaiky lembenana anefa ny fokonolona tamin’io fotoana io ka raikitra ny fifandonana. Vokany, dahalo roa indray matin’ny fokonolona tamin’io fotoana io. Tsy nahazo na inona na inona kosa anefa ireo malaso, saingy tafaporitsaka ny sasany raha namoy ny ainy ireo roa lahy. Fantatra fa isan’ireo nokasain’ireo dahalo hotafihina koa ny tranon’izy valo mianaka novonoin’ny dahalo ireto, saingy tsy azon’izy ireo. Nanao tampody fohy namaly faty anefa ry zalahy omaly halina ka izao namono fianakaviana valo mianaka izao. Tsy afa-nanao na inona na inona rahateo izy ireo satria tsy nisy lalana azo nivoahana intsony noho ny fantsika nataon’ireo dahalo tamin’ny varavaran’ny trano. Sempotry ny afo tao izy valo mianaka ka niara-maty tao an-trano.
Andihizan’ny dahalo ny tanàna…
Hatairana ny an’ireo fokonolona teo an-tanàna nahita ny fijoalajoalan’ny afo narahina setroka. Nikorompaka nifanome tanana nanao izay ho afany tamin’ny famonoana ny fokonolona, saingy tsy voafehy intsony ny afo. Nohamafisin’ireo mponina teo an-tanàna fa efa nampoizin’izy ireo ihany ny fahatongavan’ireo dahalo hanao valifaty noho ny fahafatesan’ny naman’izy ireo ka ireto fianakaviana valo mianaka ireto no nanamparan’ireo dahalo ny hatezerany. Isan’ireo namoy ny ainy ny zazavavikely iray vao avy natao kaominio voalohany.
Efa tonga nanao fanadihadiana any an-toerana ny mpitandro filaminana. Aiza ny mpitondra fanjakana manoloana ny habibiana mahatsiravina ataon’ny dahalo toy izao? Andihizan’ny dahalo ny tanàna, ny mpitondra fanjakana rahateo variana mifanjevo amin’ny adilahy politika tsy mitondra mankaiza. Tsy afa-miala na hihevotrevotra hanadio tena amin’izany sy/na mody hitondra fanampiana ny fianakavian’ireo niharam-boina ny mpitondra satria nisy ain’olona nafoy tao. Tokony hampitomboina ny isan’ireo mpitandro filaminana miasa any amin’ireny faritra mena amin’ny asan-dahalo ireny.